नेपालमा पनि नयाँ प्रजातीको कोरोना भाइरसको (भेरियन्ट) संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बेलायतबाट फर्किएका मध्ये नमुना परीक्षण गर्दा तीनजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
बेलायतबाट फर्किका मध्ये ६ जनामा नमुना परीक्षण गरिएकोमा फरक लक्षण पाइएको थियो। त्यसपछि परिक्षणका लागि नमुना हंकङ पठाइएकोमा तीनजनामा नयाँ कोरोना भाइरस पोजेटिभ पाइएको हो।
उक्त नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा पौष २७ गते पठाइएको थियो।
‘हामीले पठाएको नमुना मध्ये तीनजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ,’ डा. गौतमले भने।
२८ वर्षीय महिला, ६७ वर्षीय पुरूष र ३२ वर्षीय पुरूषमा संक्रमण पुष्टि भएको डा. गौतमले बताए।
‘उहाँहरूमा बेलायतमा देखिएको प्रजातिको भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो,’ उनले भने, ‘संक्रमण पुष्टि भएका तीनमध्ये दुईजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। तर, ६७ वर्षीय पुरूपमा संक्रमण भए पनि लक्षण छैन।’